Dare reDzimhosva Rinorasa Danho raVaChombo reKudzinga Makanzura
Gumiguru 26, 2011
Dare repamusoro neChipiri rakapa mutongo wekuti makanzura eguta reHarare akanga adzingwa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu, VaIgnatius Chombo, vachivapomera mhosva dzehuwori, adzorerwe pamabasa awo sezvo vakanga vadzingwa zvisina tsarukano.
Vachipa mutongo wavo, mutongi wedare, Justice Bharat Patel, vakati zvakawanikwa nekomiti yakaumbwa naVaChombo kuti iferefete makanzura aya, hazvina hudzamu.
Makanzura mana akanga amiswa basa gore rapera anoti VaPaul Gorekore veWard 3, VaMaxwell Katsande veWard 26, VaSilas Machetu veWard 25 pamwe naVaJohnson Zaranyika veWard 39.
Svondo rapera mamwe makanzura maviri eMDC-T, VaWarship Dumba naVaCasper Takura, avo vakanga vamiswa basa naVaChombo zvakare, vachipomerwa mhosva yekubira kanzuru, vakawanikwa vasina mhosva nedare ramejesitiriti.
Bato reMDC-T ragara richichemachema nematongerwo arinoti ari kuitwa makanzuru naVaChombo, richiti zvine zvematongerwo enyika mukati. Bato iri rinopomerawo ivo VaChombo mhosva yekuita zvehuwori.
NeChipiri chakare, dare reparamende rakatambira kurudziro yekuti mutemo wekutongwa kwemakanzuru, weUrban Councils Act (chapter 29:15) uvandudzwe kuitira kudimura masimba egurukota rezvekutongwa kwematunhu pamusoro pemaguta nemakanzuru.
Munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC-T, uye vari mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu, VaSesil Zvidzai, vanoti bato ravo rinoona mutongo uyu ucharatidza VaChombo nzira yekubata nayo makanzuru.
Studio 7 haina kukwanisa kubata VaChombo, avo vanzi vari kuSingapore.